Vaovao sy torohevitra momba ny Affiliates, Vaovao IQoption & torohevitra
IQOption » News » Vaovao sy torohevitra momba ny Affiliates » IQoption Robots - mandeha ho azy amin'ny iqoption
IQ OPTION ROBOTS -rafitra varotra mandeha ho azy
Raha ny fahalalako azy dia tsy misy IQ OPTION autotrading robot hiasa amin'ny IQ OPTION sehatra. Misy ny mpanome famantarana fa tsy hiantehitra amin'izy ireo aho. Ny fomba tsara indrindra hampiasana vola IQ OPTION dia ny mianatra sy mampivelatra ny rafitr'izy ireo manokana. Aza miantehitra rafitra varotra mandeha ho azy.
Raha mbola te hanandrana robot varotra auto ho an'ny brokers hafa ianao dia manoro hevitra anao mafy aho hanohitra izany. Amin'ny maody fampisehoana dia toa mandeha tsara izy ireo. Amin'ny varotra tena izy ireo dia mamoy vola mandritra ny fotoana maharitra. Apetraho fotsiny ny fanontaniana - iza no te-hivarotra ilay rafitra $ 100 ary milaza fa afaka manambola be izy. TSIA matanjaka ary ho ahy dia SCAM io.
Nisy ny Robot IQ Ofisialy (izay nampidirina tao IQ OPTION Platform) tamin'ny 2016 fa nikatona tamin'ny taona 2017. Azafady vakio ny fampahalalam-baovao ofisialy:
IQ OPTION Mihidy ny robot!
Ity dia IQ OPTION famoahana naoty amin'ity lafiny ity amin'ny mpiara-miasa rehetra:
Nikatona ny tetik'asa IQ Robots noho ny tsy fandanjalanjana ara-teknika. Ny fahamendrehana sy ny fanajana ireo mpampiasa anay dia mijanona ho soatoavina fototra ho an'ny IQOPTION.
Manomboka amin'ny faha-17 Janoary dia hahita pejy manokana mampahafantatra momba izany ao amin'ny sehatra IQ Robots ireo mpampiasa. Esory azafady ny fampahalalana rehetra avy amin'ny hevitrao ary ampiasao pejy fitaterana hafa amin'ny tranokalanao sy amin'ny doka. Raha sendra mankany amin'ny pejin'ny robots.iqoption.com ny iray amin'ireo mpampiasa manana ID ID dia hovelominay ao anaty rakitra fisian'ny cookie ity ID ID ity, fa kosa tena mamporisika anao izahay hanome vaovao momba ilay tetikasa mihidy ao mandroso ho an'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa bebe kokoa, na mamafa ireo rohy izay mitarika mankany amin'ny pejy fandraisana Robots.
Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana ary misaotra anao noho ny fahazoanao!
← Ny fanarahan-dalàna diso amin'ny fanondroana mpikambana ao amin'ny kaonty IQoption (voavaha) Safidy nomerika IQoption - ahoana ny fomba varotra, inona izany? →